Cabdi Waaxid Cilmi Goonjex oo ku guuleystay Doorashada Aqalka Sare ee Galmudug – STAR FM SOMALIA
Cabdi Waaxid Cilmi Goonjex ayaa noqday qofkii todobaad ee ku guuleysta Doorashada Xubnaha Aqalka Sare ee ka imaanaya Deeganada Maamulka Galmudug.
Goonjex ayaa la tartamaayay labo Musharax oo kale, balse wuxuu helay codadkii ugu badnaa oo uu ku soo baxay Doorashada.
64 cod ayuu helay C/wali Cilmi Goonjeex, Aamina Cali Maxamed oo la tartamaysay Goonjeex, ayaa iyadana heshay 13 cod, halka sidoo kale Maxamuud Maxamed Samatar oo isna tartanka qayb ka ahaa uu helay 11 cod.
C/wali Goonjex wuxuu noqonayaa qofkii todobaad ee si rasmi ah ugu biira Aqalka Sare ee dalka, isaga oo ka soo galay Deeganada Maamulka Galmudug.
Xubinta ugu dambeysa ee Doorashada Aqalka Sare ee Galmudug ayaa hada ka socota Magaalada Cadaado, waxaana la filayaa in goor dhaw la soo gaba gabeeyo guud ahaan Doorashada.
Xildhibaanada Baarlamaanka maamulka Galmudug ayaa u codeynaya Dadka doonaya inay ka mid noqdaan Aqalka Sare ee dalka.
Abuukar Axmed Xaashi oo noqday qofkii ugu dambeeyay ee ku guuleysta Doorashada Aqalka Sare ee Galmudug